ኢያሱ 12 NASV – Yosua 12 ASCB | Biblica
ኢያሱ 12 NASV – Yosua 12 ASCB
Ahemfo A Wɔdii Wɔn So Wɔ Yordan Apueeɛ Fam
1Yeinom ne ahemfo a wɔwɔ Asubɔnten Yordan apueeɛ fam a wɔkunkumm wɔn na wɔfaa wɔn nsase. Wɔn nsase no firi Arnon Subɔnhwa kɔsi Bepɔ Hermon so a Yordan Bɔnhwa asase a ɛwɔ apueeɛ fam nyinaa ka ho.
2Wɔdii Amorifoɔhene Sihon a na ɔte Hesbon so.
Na nʼahemman bi ne Aroer a ɛwɔ Arnon Subɔnhwa ano na ɛtene firi ne mfimfini kɔsi Asubɔnten Yabok a ɛda hɔ sɛ ɛhyeɛ ma Amorifoɔ no. Ɛnnɛ yi, Gilead fa a ɛda Asubɔnten Yabok atifi no ka ɔmantam no ho.
3Ɛfiri Yordan bɔnhwa atifi a ɛbɛn Galilea ɛpo no atɔeɛ fam mpoano na ɛsiane ba anafoɔ fam bɛsi Nkyene Ɛpo, firi Bet-Yesimot kɔsi Pisga nsianeɛ so hyɛɛ Sihon ase.
4Basanhene Og a ɔtwa Refaimfoɔ to no tenaa Astarot ne Edrei asase so.
5Na ɔdii ɔhene wɔ ɔman a ɛfiri Bepɔ Hermon so de kɔsi Saleka wɔ atifi fam ne Basan a ɛwɔ apueeɛ fam nyinaa, de kɔ atɔeɛ fam kɔsi Gesurfoɔ ne Maakatfoɔ ahemman ɛhyeɛ so. Gilead fa a ɛwɔ atifi fam, ne ɛfa a aka a na ɛwɔ Hesbonhene Sihon asase mu no ka ho.
6Na Mose a ɔyɛ Awurade ɔsomfoɔ no ne Israelfoɔ atɔre ɔhene Sihon ne ɔhene Og nkurɔfoɔ ase. Mose de wɔn asase maa Ruben ne Gad mmusuakuo ne Manase abusua fa no.
Yordan Apueeɛ Fam Ahemfo A Wɔdii Wɔn So
7Saa ahemfo a wɔn din didi soɔ yi na Yosua ne Israel akodɔm dii wɔn so wɔ Yordan atɔeɛ fam firi Baal-Gad wɔ Lebanon bɔnhwa mu de kɔsi Halak bepɔ a ɛkɔsi Seir no. Na Yosua de asase no maa Israel mmusuakuo no sɛ wɔn agyapadeɛ, 8a ɛne bepɔ so ɔman, atɔeɛ fam nkokoɔ, Yordan Bɔnhwa, mmepɔ mmepɔ nsianeɛ, Yudea ɛserɛ so ne Negeb. Nnipa a na wɔte saa beaeɛ hɔ no yɛ Hetifoɔ, Amorifoɔ, Kanaanfoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ.
Yeinom ne ahemfo a Israel dii wɔn so nkonim:
9Yerikohene baakoAi a ɛbɛn Bet-El ɔhene baako10Yerusalemhene baakoHebronhene baako11Yarmuthene baakoLakishene baako12Eglonhene baakoGeserhene baako13Debirhene baakoGederhene baako14Hormahene baakoAradhene baako15Libnahene baakoAdulamhene baako16Makedahene baakoBet-Elhene baako17Tapuahene baakoHeferhene baako18Afekhene baakoLasaronhene baako19Madonhene baakoHasorhene baako20Simronhene baakoAksafhene baako21Taanakhene baakoMegidohene baako22Kedeshene baakoYokneam a ɛwɔ Karmel ase ɔhene baako23Dor a ɛwɔ Dor kokoɔ so ɔhene baakoamanaman a ɛwɔ Gilgal no ɔhene baako24Tirsahene baako
ASCB : Yosua 12